Miara-miasa amin’ny Google sy ny Odoo ny Etech | NewsMada
Miara-miasa amin’ny Google sy ny Odoo ny Etech
Par Taratra sur 12/11/2016
Miroborobo ny fikirakirana ny Teknolojian’ny fifandraisan-davitra sy ny informatika (Tics). Orinasa iraisam-pirenena, manana rantsa-mangaika eto Madagasikara ny Etech. Ho an’ny tsena any ivelany, ataony ny fikirakirana ny tontolon’ny antontam-baovao sy ny asa samihafa amin’ny lafiny informatika sy ny tambajotran-tseratsera, ilain’ireo orinasa vahiny.
Ho fanitarana sy hanatsarana ny fiasa, nahazo fankatoavana avy amin’ny Google sy ny Odoo ny Etech, hikirakira ny logiciel-n’ireo orinasa matanjaka iraisam-pirenena ireo.
Miditra amin’ny tsena anatiny koa ny Etech, ankehitriny, miara-miombon’antoka amin’ny orinasa Nelli Studio, mikirakira ny famokarana sarimihetsika na sary miaina informatika.
Nambaran-dRazafindramalo Tahina Michel, talen’ny fampandrosoana ny Etech-ranomasimbe Indianina, fa tena mpanjifan’izy ireo amin’ny orinasa vaventy ireo mampiasa olona mihoatra ny 200. Atao amin’izany ny famoronana fitaovam-piasana “logiciel”, amin’ny fitantanana samihafa ilain’ny orinasa, toy ny mikasika ny mpiasa, ny varotra, ny tahirin’entana, ny kaontim-pitantanana sy ny vola, sns.
Toraka izany koa ny orinasa madinika sy salantsalany (PME), ary koa ny olon-tsotra na orinasa na mpandraharaha, toy ny fampidirana fitaovam-pifandraisana “application” anaty finday, na koa ny famoronana adiresy elektronika site web.
Manome tolotra maimaimpoana koa ny Etech, “application” ho an’ny mpamily fiara azo ampidirina ao anatin’ny finday Androïd sy ny Iphone. Anisan’izany ny nomena anarana hoe “Taksiborosy”, manondro ny sarintany sy ny lalana misy eto Madagasikara, ny “taxibe”, manondro ny tanàna sy ny lalana an-tanàn-dehibe, sns.